सचिवहरुको सरुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय, कुन मन्त्रालयमा काे ? (विवरणसहित) -
सचिवहरुको सरुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय, कुन मन्त्रालयमा काे ? (विवरणसहित)
३० आश्विन २०७७, शुक्रबार १३:२७ 34 पटक हेरिएको
काठमाडौं । नवनियुक्त तीन मन्त्रीसहित बिहीबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले करिब एक दर्जन सचिवहरुको सरुवा गरेको छ ।
नवनियुक्त तीन मन्त्रीले सपथ ग्रहण गरेकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवहरुको सरुवा गरेपछि चर्चाकाे विषय बनेकाे छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ओलीले नयाँ मन्त्रीहरुलाई ढुक्कसँग काम गर्न सहयोग गर्ने बताए ।
त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सुरुवा गरिएको छ । खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा भएका छन् ।
बिहीबारको बैठकले सरकारका प्रवक्ता तोक्ने र कोरोना नियन्त्रणका लागि ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सीसीएमसीको जिम्मेवारीबारे पनि छलफल हुने अनुमान गरिएकोमा सो विषयमा पनि छलफल भएन ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीले आफैं रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका थिए । पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्काइएको छ ।
त्यस्तै महिला मन्त्री पार्वत गुरुङलाई सञ्चारमन्त्री बनाइएको थियो ।